ठीक सङ्कलन गर्न कसरी र धूम्रपान: स्याउ मा हुक्का
हुक्का धूम्रपान - यो विदेशी प्राच्य परम्परा को एक पश्चिमी समाजमा जरा लिएका छन्। खैर, पनि धेरै हाम्रो देशमा यस्तो अनुष्ठान आपत्ति छैन। लोकप्रिय विश्वास विपरीत, को हुक्का आधुनिक संस्कृति धूम्रपान लागूपदार्थ संग गर्न केही छ। यो उपकरणको प्रयोग - एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भनेर विश्राम र सौहार्द हासिल गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, लगभग हुक्का छैन हानिकारक, को धुवाँ को subsoil तत्संबंधी, रेजिन देखि purified र cooled मार्फत बित्दै किनभने छ। यो एकाइ अर्को प्लस - स्वाद विन्यास को एक विशाल विविधता। तपाईं दूध र मादक पेय को एक किसिम संग भर्न सक्नुहुन्छ। स्याउ पनि धेरै लोकप्रिय हुक्का।
आज, यो परम्परा पश्चिमी देशहरूमा मात्र यसलाई आफ्नो सान्दर्भिकता कहिल्यै गुमाएको छ जहाँ पूर्व, मा पनि अत्यन्तै लोकप्रियता प्राप्त, तर पनि छ। निस्सन्देह, विश्राम र मनन गर्न आफ्नो बेचैन मन को गलियारों मा endlessly लक्षविना हिड्नु गर्न accustomed आधुनिक शहर dweller गर्न peculiar छन्। तर हालै त्यहाँ पूर्व को रहस्यमय र रहस्यमय संस्कृति बुझ्न चाहने थप मानिसहरू हुन्।
हुक्का को इतिहास
निश्चित थाहा हुक्का धूम्रपान एशिया मा थाले छ। तर, यो परम्परा सुरु गर्ने ठीक, त्यहाँ सानो मतभेद छन्। केही पहिलो हुक्का भारत धूम्रपान सुरु भन्न, अरूलाई टर्की उत्पत्ति भएको तर्क। यसलाई जो थियो, हामी मूल opium र सुकेका सुपारीघारी धूम्रपान लागि अभिप्रेरित थियो भनेर थाह छ। चुरोट को सुकेको नट गोले मार्फत पारित, तरल भरिएको। एकाइ को शीर्ष मा हुक्का लागि कोइला राख्नु जो एक कचौरा छ। को xvi शताब्दीमा वरिपरि, यो उपकरण आधुनिक, परिचित नजर भएको छ।
परिवर्तन भएको छ फरक देशहरुमा हुक्का फैलाउने र यसका सामग्रीहरू संग। म घातक opium प्रतिस्थापन, लोकप्रियता सुर्ती धेरै पाउनु भएको छ। परंपरागत, एक हुक्का यो धुवाँ फिल्टर हानिकारक यौगिकों फरक छ र एक नरम, अविस्मरणीय स्वाद दिन्छ देखि, दूध भरिएको छ। तपाईं पनि यस्तो ब्रान्डी वा रक्सी रूपमा, कुनै पनि अन्य तरल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै न्यायाधीशहरूले साहसी आफ्नो सपना को एक स्वाद खोज्दै, प्रयोग गरिरहेका।
स्याउ मा हुक्का
एक हुक्का धूम्रपान गर्ने, र पहिले नै फरक विन्यास सयौं प्रयास गर्न व्यवस्थित छ गर्नेहरूका लागि ठूलो नुस्खा छ। यसको सार सट्टा एक माटोको कचौरा, सुर्ती भरिएको छ जो, एक स्याउ राख्न छ। यो एक, नयाँ ताजा र बोल्ड स्वाद दिन्छ।
यस्तो परिमार्जनहरू बनाउन यो एक ताजा स्याउ सुविधाजनक आकार, चक्कु र Toothpicks आवश्यक छ, एकदम सरल छ।
त्यसैले, स्याउ मा एक हुक्का बनाउन, तपाईं पहिले फल चक्कु माथिल्लो तेस्रो ट्रिम र उहाँले एक कचौरा जस्तो भनेर आफ्नो हृदय सफा गर्न आवश्यक छ। यो कठिनाई बिना सुर्ती को सही राशि, साथै कोइला मा फिट भनेर यो आकारको हुनुपर्छ। कचौरा उचित नजर हुनेछ पछि, यो एक प्वाल बनाउन आवश्यक छ। यसलाई एक पटक माटोको डिजाइन उभिए जो ट्यूब, सम्मिलित छ। अब, कचौरा तल्लो क्षेत्रमा उनीहरूले जो सुर्ती आराम गर्न मा एक ग्रिड फारम भनेर केही Toothpicks स्थापना गर्न चाहन्छौं।
यहाँ, को कचौरा स्थापित छ, ठाउँ मा सुर्ती, यो मात्र, पन्नी संग सम्पूर्ण कुरा उनको Crayon धारण ढाक्न रहन्छ - र स्याउ हुक्का तयार छ। फल परिचित सुर्ती नयाँ स्वाद दिन हुनेछ, र उपस्थिति डिजाइन आफ्नो अतिथि indifferent छोड्न छैन।
हुक्का लागि कोइला
कोइला - यो हुक्का अभिन्न भाग। यो एक लामो समय को लागि बाल्न र सामान्यतया धेरै नम छ धूम्रपान सुर्ती, लागि पर्याप्त गर्मी प्रदान गर्नुपर्छ। कोइला तीन प्रकारका हुन सक्छ। पहिलो, सजिलो विकल्प - सबै राल हटाइएको जो एक रूख। यो हुक्का धूम्रपान लागि उपयुक्त, तर लामो समय को लागि रोशनी छ। दोस्रो विकल्प - extruded कार्बन। यस्तो पदार्थ एक लामो समय को लागि बल्छ र यो एक उत्कृष्ट विकल्प बनाउन हुक्का मा आरामपूर्वक गेट-लागि, गर्मी धेरै दिन्छ। र अन्तमा, त्यहाँ आफ्नो तीव्र आगो योगदान विशेष additives संग थिचिएको कोइला छ। कुनै कुरा के तपाईं फ्लास्क, स्याउ मा सामान्यतया हुक्का वा shisha भर्न - राम्रो कोइला एकाइ बिना बस सुन्दर baubles हुनेछ।
पानी पाइप गर्न सुर्ती
यो प्याड पाइप वा samokrutochnogo सुर्ती देखि गम्भीर फरक छ। धूम्रपान प्रक्रिया सही गति मा थियो, कि सुकेको बोट भारी moistened गर्नुपर्छ। हुक्का लागि सुर्ती को आजको लोकप्रिय प्रकार - maassil। यो मह वा गुड समावेश रूपमा यसको स्थिरता, जेली जस्तो। यो एक हुक्का Orient सामान्य मार्फत धूम्रपान गर्न सकिन्छ, तर यो गर्न आवश्यक पूर्व-moisten र बाहिर मुडना। भारतीय zhurak - यी दुई प्रजातिहरू बीच मा केहि किन्न एक संभावना छ। यसको congener मानक रूपमा स्याउ मा हुक्का, राम्रो "शुल्क" आवश्यक छ। भयानक रसायन सुर्ती संग सस्तो गर्भवती, पनि सबैभन्दा महंगा उपकरण बिगार्न सक्छ।
कि नगर्ने हुक्का धूम्रपान गर्न?
हुक्का साथै यो सुखद कम्पनी मा शान्तिपूर्ण छुट्टी बढवा दिन्छ। यसको धुवाँ जस्तै गम्भीर एउटा चुरोट वा पाइप जस्तै, शरीर को नोकसान छैन। धेरै nonsmokers मान्छे, आराम एक हुक्का SIP गर्न चाहनुहुन्छ। यो पूर्वी gimmick मा समीक्षा सामान्यतया धेरै सकारात्मक छ। तर सुर्ती कुनै पनि तरिकामा हानिकारक छ, र हुक्का धूम्रपान कुनै अपवाद छ कि भूल छैन।
के थप हानिकारक छ: हुक्का वा चुरोट?
धूम्रपान हैं: हडताली तथ्याङ्क!
स्वाद TPA: हस्तक्षेप गर्न वा हस्तक्षेप छैन?
Shisha को इतिहास: रमाइला तथ्य
FlavourArt कुनै विशेष परिचय आवश्यक विद्युतीय चुरोट लागि तरल पदार्थ
बैग मा खीरे रोपण। बैग र बोतल मा खीरे बढ्दै
घरमा Spathiphyllum को प्रसार
इन्सुलेशन एक आंशिक छुट्टी: आंशिक छुट्टी को घटना को प्रक्रिया
समाज को Informatization
ल्याप्टपमा चमक कसरी घटाउने: ऊर्जा बचतको रहस्य र न केवल ...
भौं: राम्रो बनाउन कसरी?
"बुद्धिमान व्यक्ति" को परिभाषा केही पक्षहरू